Adɛn Nti na Ɛsɛ sɛ Yeyi Yehowa Nyankopɔn Ayɛ?—Dwom 147:1 | Adesua
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Amis Angolan Sign Language Arabic Argentinean Sign Language Armenian Australian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bashkir Bassa (Cameroon) Bengali Bicol Bolivian Sign Language Boulou Brazilian Sign Language British Sign Language Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chilean Sign Language Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chinese Sign Language Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chol Chuvash Cibemba Cinyanja Colombian Sign Language Croatian Cuban Sign Language Czech Czech Sign Language Dangme Danish Digor Douala Dutch Ecuadorian Sign Language Edo Efik English Estonian Ewe Fijian Filipino Sign Language Finnish Finnish Sign Language Fon French French Sign Language Ga Garifuna Georgian German German Sign Language Greek Greek Sign Language Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Hungarian Sign Language Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Indonesian Sign Language Isoko Italian Italian Sign Language Japanese Japanese Sign Language Jula Kabiye Kannada Kikamba Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Korean Sign Language Kurdish Kurmanji Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malawi Sign Language Malay Malayalam Mam Mambwe-Lungu Marathi Maya Mazatec (Huautla) Mbunda Mexican Sign Language Mingrelian Mixe (North Central) Mongolian Moore Motu Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngabere Nigerian Pidgin Norwegian Nzema Okpe Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Curaçao) Paraguayan Sign Language Persian Peruvian Sign Language Pidgin (Cameroon) Polish Polish Sign Language Portuguese Portuguese Sign Language Punjabi Quebec Sign Language Quechua (Ancash) Quechua (Bolivia) Romanian Romanian Sign Language Russian Russian Sign Language Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovak Sign Language Slovenian Solomon Islands Pidgin South African Sign Language Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Taiwanese Sign Language Tajiki Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tshiluba Tsonga Tswana Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzeltal Tzotzil Ukrainian Urhobo Uzbek Venda Venezuelan Sign Language Vietnamese Waray-Waray Welsh Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zimbabwe Sign Language Zulu
“Munyi Yah ayɛ . . . Ɛyɛ dɛ; ayeyi no fata.”​—DW. 147:1.
NNWOM: 104, 152
SƐN NA DWOM 147 BOA WO MA . . .
wuhu sɛ Yehowa dwen wo ho?
wunya ahotoso sɛ Onyankopɔn begye wo?
wuhu sɛnea Yehowa nam n’Asɛm no so boa ne nkurɔfo?
1-3. (a) Ɛbɛyɛ sɛ bere bɛn na wɔkyerɛw Dwom 147? (b) Dɛn na yebetumi asua afi Dwom 147 mu?
SƐ YƐDE adwuma bi hyɛ obi nsa na ɔyɛ no yiye a, yɛma no amo. Bio nso, sɛ obi da suban pa bi adi a, yɛkamfo no. Sɛ yɛkamfo nnipa de a, ɛnde ɛsɛ sɛ yɛkamfo Yehowa Nyankopɔn sen obiara! Yebetumi ayi Yehowa ayɛ efisɛ ne tumi nni ano. Yehu ne tumi wɔ n’abɔde a ɛyɛ fɛ no mu. Yebetumi nso ayi no ayɛ esiane ɔdɔ kɛse a wada no adi akyerɛ nnipa nti. Ɛho nhwɛso ne sɛ, ɔde ɔno ara ne Ba mae sɛ ɔmfa ne nkwa mmɛbɔ afɔre mma yɛn.
2 Onii a ɔkyerɛw Dwom 147 no koma kaa no ma oyii Yehowa ayɛ. Ɔsan hyɛɛ afoforo nkuran sɛ wonyi Onyankopɔn ayɛ.—Kenkan Dwom 147:1, 7, 12.
3 Yennim onii a ɔkyerɛw saa dwom yi, nanso ɛbɛyɛ sɛ odwontofo a ɔkyerɛwee no tenaa ase bere a Yehowa gyee Israelfo fii Babilon nkoasom mu baa Yerusalem no. (Dw. 147:2) Odwontofo no yii Yehowa ayɛ efisɛ na Onyankopɔn agye ne nkurɔfo de wɔn aba wɔn asase so, baabi a wobetumi de nokwaredi asom no bio. Nanso ɛnyɛ ɛno nko ara. Odwontofo no san kaa nneɛma foforo nti a Yehowa fata ayeyi. Ɛyɛ nneɛma bɛn? Nneɛma bɛn na ɛbɛma wo nso woatumi ateɛm aka sɛ “Halelu-Ya!” anaa “Munyi Yah ayɛ”?—Dw. 147:1, Akuapem Twi Bible Dedaw.
YEHOWA SA WƆN A WƆN KOMA ABUBU YARE
4. Ɔhene Kores maa Israelfo a wɔwɔ Babilon nnommumfa mu nyaa ahofadi. Wonyaa ahofadi no, wohwɛ a wɔtee nka sɛn, na adɛn ntia?
4 Israelfo a na wɔwɔ Babilon nnommumfa mu no, wohwɛ a na wɔbɛte nka sɛn? Babilonfo a wɔfaa Israelfo no nnommum no dii wɔn ho fɛw kae sɛ: “Monto Sion nnwom no bi mma yɛn.” Saa bere no, Yerusalem a na ɛma Israelfo di ahurusi paa wɔ Yehowa mu no, na wɔasɛe no. (Dw. 137:1-3, 6) Yudafo no anto dwom no efisɛ na wɔn koma abubu. Ná wohia awerɛkyekye. Sɛnea Onyankopɔn ka too hɔ no, ɔnam Persia hene Kores so gyee ne nkurɔfo. Kores dii Babilon so nkonim na ɔkae sɛ: “Yehowa, . . . na wahyɛ me sɛ minsi ofie mma no wɔ Yerusalem . . . Enti obiara a ɔka mo ho a ɔsom no no, Yehowa, ne Nyankopɔn nni n’akyi. Ma ɔmforo nkɔ.” (2 Be. 36:23) Ɛbɛyɛ sɛ wei maa Israelfo a wɔte Babilon no koma tɔɔ wɔn yam paa!
5. Dɛn na odwontofo no ka faa tumi a Yehowa de sa yare no ho?
5 Yehowa kyekyee Israel man no werɛ, na ɔkyekyee ankorankoro biara nso werɛ. Ɛnnɛ nso, Yehowa yɛ saa ara. Odwontofo no kaa Onyankopɔn ho asɛm sɛ: “Wɔn a wɔn koma abubu no ɔsa wɔn yare, na ɔkyekyere wɔn akuru.” (Dw. 147:3) Nokwasɛm ne sɛ, wɔn a wɔyare ne wɔn a wɔabotow nyinaa, Yehowa dwen wɔn ho. Ɛnnɛ, Yehowa ayɛ krado sɛ ɔbɛkyekye yɛn werɛ. Sɛ yɛreteetee nso a, ɔboa yɛn ma yɛn ho dwo yɛn. (Dw. 34:18; Yes. 57:15) Ɔhaw biara a yebehyia no, ɔma yɛn nyansa ne ahoɔden ma yɛde gyina ano.—Yak. 1:5.
6. Yɛhwɛ Dwom 147:4 a, ɛte sɛ nea odwontofo no danee asɛm a ɔreka no. Wei boa yɛn sɛn? (Hwɛ mfonini a ɛwɔ adesua yi mfiase no.)
6 Afei odwontofo no kaa nneɛma a ɛwɔ soro ho asɛm. Ɔkae sɛ, Yehowa ‘kan nsoromma dodow’ na “ɔbobɔ wɔn nyinaa din frɛfrɛ wɔn.” (Dw. 147:4) Adɛn nti na ɛte sɛ nea odwontofo no asesa asɛm no reka nneɛma a ɛwɔ soro ho asɛm? Susuw wei ho hwɛ: Ná odwontofo no tumi de n’ani hu nsoromma, nanso na onnim ne dodow. Nnansa yi, nyansahu nti yetumi hu nsoromma pii. Ebinom ka sɛ yɛfa yɛn Milky Way nsoromma kuw no nko ara a, nsoromma ɔpepepem pii na ɛwom. Ebetumi aba sɛ nsoromma akuw ɔpepepepem pii na ɛwɔ amansan yi mu! Onipa biara nni hɔ a obetumi akyerɛ nsoromma dodow a ɛwɔ hɔ! Nanso Ɔbɔadeɛ no ama wɔn nyinaa din anaa wahyɛ wɔn nsow. Wei kyerɛ sɛ Yehowa nim sɛnea nsoromma biara te. (1 Kor. 15:41) Nnipa a wɔwɔ asase so nso ɛ? Yɛrekasa yi, Onyankopɔn nim baabi a nsoromma biara wɔ, enti wo nso onim wo paa. Sɛ ɛhe na wowɔ oo, sɛn na wote nka oo, dɛn na wuhia oo, bere bɛn na wuhia dekode no oo, onim ne nyinaa!
7, 8. (a) Sɛ Yehowa reboa ne nkurɔfo ama wɔagyina ɔhaw bi ano a, dɛn na ɔkae? (b) Ma mfatoho fa kyerɛ sɛ, sɛ Yehowa reboa nnipa a bɔne wɔ wɔn ho a, ɔte wɔn ase.
7 Yehowa dwen wo ho na onim nea worefa mu. Ɔhaw a worehyia wɔ asetena mu no, ɔwɔ tumi a ɔde bɛboa wo ama woagyina ano. (Kenkan Dwom 147:5.) Tebea a wowom no, ebia wote nka sɛ woyɛ ho hwee a ɛnyɛ yiye. Onyankopɔn te wo ase na ‘ɔkae sɛ woyɛ mfutuma.’ (Dw. 103:14) Bɔne wɔ yɛn ho, enti yɛtaa di mfomso. Mfomso koro no ara, wobɛhwɛ na yɛasan akɔyɛ bio. Ɛtɔ da a yetumi ka asɛm bi, akyiri yi na yɛanu yɛn ho. Ɛyɛ ara ni na honam akɔnnɔ retwetwe yɛn, anaa wobɛhwɛ mpo na yɛn ani bere obi ade! Yehowa deɛ, mfomso a ɛte saa biara nni ne ho. Nanso sɛ yɛrefa ɔhaw bi mu a, sɛnea Yehowa te yɛn ase no, yɛrentumi nkyerɛ mu mpo.—Yes. 40:28.
8 Yɛreka yi, ebia na Yehowa de ne nsa a ɛyɛ den no aboa wo ama woagyina ɔhaw bi ano. (Yes. 41:10, 13) Yɛnhwɛ onuawa kwampaefo bi a ne din de Kyoko. Otu fii baabi a ɔwɔ kɔyɛɛ ɔsom adwuma no wɔ baabi foforo. Okoduu hɔ no n’abam bui. Dɛn na Yehowa yɛe de kyerɛe sɛ onim ɔhaw a onuawa no refa mu? Asafo a Kyoko kɔɔ mu no, na anuanom pii te no ase. Ɛma ɔtee nka sɛ Yehowa reka asɛm bi akyerɛ no. Ɛne sɛ: “Ɛnyɛ akwampae adwuma a woreyɛ nti na medɔ wo, na mmom woyɛ me babea a woahyira wo ho so ama me. Woyɛ me Danseni, enti mepɛ sɛ w’ani gye!” Wo nso ɛ? Dɛn na ade nyinaa so Tumfoɔ no ayɛ ama wo a ɛma wuhu sɛ “ne ntease mu nni hwehwɛbea”?
YEHOWA MA YƐN NEA YEHIA
9, 10. Sɛ Yehowa reboa yɛn a, dɛn na ɔde di kan? Ma ɛho nhwɛso.
9 Ɛtɔ da a wuhia nea wubedi, nea wobɛhyɛ, ne baabi a wobɛda. Ebia w’adwene bɛyɛ wo sɛ nea wubedi ho bɛyɛ den ama wo. Nanso Yehowa na ɔyɛɛ nhyehyɛe a ɛma asase no ma yɛn aduan a yehia. Ɔma kwaakwaadabi mma a wosu frɛ no daa no mpo aduan! (Kenkan Dwom 147:8, 9.) Sɛ Yehowa ma kwaakwaadabi aduan daa a, ɛnde wubetumi anya awerɛhyem sɛ nea wuhia biara ɔbɛma wo nsa aka.—Dw. 37:25.
10 Yehowa ma yɛn nea ɛsen saa. Ɔma yɛn nneɛma a ɛbɛboa yɛn ama yɛn gyidi ayɛ den, na ɔma yɛn “Onyankopɔn asomdwoe a ɛboro adwene nyinaa so.” (Filip. 4:6, 7) Yɛnhwɛ Mutsuo ne ne yere asɛm yi. Bere a ɛpo twiw faa asase so wɔ Japan afe 2011 no, wohui sɛ Yehowa de ne tumi boaa wɔn. Ɛkaa dɛ ma ɛpo no twiw faa wɔn so, nanso wɔforo kɔɔ wɔn dan atifi kɔbɔɔ wɔn ho aguaa. Saa da no, wɔhweree wɔn agyapade nyinaa ara ne sa. Wɔn dan a ɛsɛee no, na ɛyɛ abansoro. Saa anadwo no, wonyaa baabi wɔ soro hɔ dae maa ade kyee. Ná awɔw ne sum wɔ dan no mu. Ade kyee no, wɔhwehwɛɛ biribi a ɛbɛhyɛ wɔn gyidi den. Nhoma a wonyae ara ne afe 2006 Yearbook of Jehovah’s Witnesses. Bere a Mutsuo rehwɛ nhoma no mu no, n’ani bɔɔ asɛmti bi so. Ɛno ne, “Ɛpo Mu Asasewosow a Akunkum Nnipa Sen Biara.” Ná ɛfa asasewosow a esii Sumatra afe 2004 no ho. Asasewosow no maa ɛpo twiw faa asase so. Sɛnea esi sɛe nneɛma no, na ebi nsii saa da. Mutsuo ne ne yere rekan osuahu ahorow no nyinaa na wɔresu. Wohui sɛ Onyankopɔn dwen wɔn ho, efisɛ bere a wohia nkuranhyɛ no ara na Onyankopɔn kyekyee wɔn werɛ. Afei nso, Yehowa ma wonyaa nea wohia wɔ honam fam. Wɔn nuanom Kristofo de nnuan ne ntade kɔmaa wɔn. Nanso nea ɛboaa wɔn paa ne sɛ, Onyankopɔn ahyehyɛde no somaa anuanom kɔsraa asafo no. Mutsuo kae sɛ: “Metee nka sɛ Yehowa ka yɛn mu biara ho na ɔde nea yehia ama yɛn. Wei kyekyee me werɛ paa!” Onyankopɔn reboa yɛn a, odi kan de nea ɛbɛhyɛ yɛn gyidi den ma yɛn. Owie a, na ɔde honam fam de nso aka ho.
MA ONYANKOPƆN MFA NE TUMI MMOA WO
11. Wɔn a wɔpɛ sɛ Onyankopɔn de ne tumi boa wɔn no, dɛn na ɛsɛ sɛ wɔyɛ?
11 Yehowa ayɛ krado bere biara sɛ ‘obedi aboa ahobrɛasefo.’ (Dw. 147:6a) Sɛ yɛpɛ sɛ ɔboa yɛn a, dɛn na ɛsɛ sɛ yɛyɛ? Ɛsɛ sɛ yɛne ne ntam yɛ kama. Sɛ yɛne ne ntam bɛyɛ papa a, ehia sɛ yɛbrɛ yɛn ho ase. (Sef. 2:3) Obi a ɔbrɛ ne ho ase deɛ, sɛ ntɛnkyea bi rekɔ so a ɔmpere ne ho. Sɛ obi yɛ bɔne tia no mpo a, ɔtwɛn kosi sɛ Onyankopɔn ankasa besiesie ɔhaw no. Yehowa hu nnipa a wɔte saa a, n’ani gye.
12, 13. (a) Dɛn na yɛkwati a ɛbɛma yɛanya Onyankopɔn mmoa? (b) Henanom na Yehowa ani gye wɔn ho?
12 Nnebɔneyɛfo nso ɛ? Onyankopɔn ‘brɛ wɔn ase de wɔn to fam.’ (Dw. 147:6b) Asɛm yi ano yɛ hyew! Sɛ yɛpɛ sɛ yenya Yehowa adɔe so mfaso na yɛmpɛ sɛ n’abufuhyew ba yɛn so a, ɛsɛ sɛ yekyi nea okyi. (Dw. 97:10) Sɛ nhwɛso no, ɛsɛ sɛ yekyi nna mu ɔbrasɛe. Enti biribiara a ebetumi ama yɛabu bra bɔne no, ɛsɛ sɛ yɛtwe yɛn ho fi ho. Ebi ne aguamansɛm ho mfonini. (Dw. 119:37; Mat. 5:28) Ebetumi ayɛ den sɛ yɛbɛtwe yɛn ho afi nna mu ɔbrasɛe ho, nanso sɛ yɛyere yɛn ho kwati a, Yehowa behyira yɛn.
13 Sɛ yebetumi adi nkonim a, ɛsɛ sɛ yɛde yɛn ho to Yehowa so. Sɛ yɛde yɛn ho to “ɔpɔnkɔ ahoɔden” so, kyerɛ sɛ, yɛkɔpɛ mmoa fi nnipa hɔ a, wohwɛ a Yehowa ani begye? Dabi! Bio nso, ɛnsɛ sɛ yɛde yɛn ho to “onipa nan ase hare” so, kyerɛ sɛ, ɛnsɛ sɛ yɛde yɛn ho to nnipa so sɛ wɔmmoa yɛn. (Dw. 147:10) Mmom, ɛsɛ sɛ yɛkɔ Yehowa anim na yɛsrɛ no sɛ ɔmmoa yɛn. Nnipa de, wode w’ahiasɛm kɔ wɔn anim mpɛn pii a, wɔte nka sɛ woreguan wɔn ho. Nanso Yehowa de, wode w’asɛm kɔ n’anim mpɛn pii koraa a, ɛrenhaw no. “Yehowa ani gye wɔn a wosuro no ho na n’ani gye wɔn a wɔtwɛn n’adɔe no ho.” (Dw. 147:11) Esiane sɛ Yehowa dɔ yɛn na odi nokware nti, yebetumi anya awerɛhyem sɛ ɔbɛboa yɛn ama yɛadi akɔnnɔ bɔne so.
14. Dɛn na na odwontofo no nim a ɛhyɛɛ no den?
14 Yehowa ama yɛn awerɛhyem sɛ, sɛ ne nkurɔfo kɔ ahohia mu a, ɔbɛboa wɔn. Bere a odwontofo no reka Yerusalem a wɔbɛsan akyekye ho asɛm no, ɔkaa Yehowa ho asɛm sɛ: “Wama wo kurow apon mmeamu ayɛ den; wahyira wo mma wɔ wo mu. Ɔma asomdwoe ba wo man mu.” (Dw. 147:13, 14) Ná odwontofo no nim sɛ Onyankopɔn bɛma kurow no apon ayɛ den na abɔ n’asomfo ho ban. Hwɛ sɛnea asɛm yi hyɛɛ odwontofo no den!
Sɛ ɔhaw bi reyɛ amene yɛn a, sɛn na Onyankopɔn Asɛm no betumi aboa yɛn? (Hwɛ nkyekyɛm 15-17)
15-17. (a) Ɛtɔ da a, sɛn na yɛte nka wɔ ɔhaw a yehyia ho, na sɛn na Yehowa de n’Asɛm no boa yɛn? (b) Ma nhwɛso fa kyerɛ sɛnea ‘Onyankopɔn asɛm de ahoɔhare tu mmirika.’
15 Wubetumi ahyia nsɛnnennen ama ɛde adwinnwen abɛto wo so. Yehowa betumi ama wo nyansa ma wode agyina ano. Odwontofo no kaa ne Nyankopɔn ho asɛm sɛ, “ɔsoma n’asɛm ba asase so; n’asɛm de ahoɔhare tu mmirika.” Afei, ɔkae sɛ Yehowa ‘de sukyerɛmma ma, ɔpete asukɔtweaa, na ɔtow asukɔtweaa.’ Ɛno akyi obisae sɛ: “Hena na obetumi agyina n’awɔw ano?” Ɛnna ɔde kaa ho sɛ, Yehowa ‘soma n’asɛm, na ɛnan.’ (Dw. 147:15-18) Yɛn Nyankopɔn a ɔyɛ nyansa ne tumi nyinaa wura no wɔ asukɔtweaa ne sukyerɛmma so tumi. Enti ɔhaw biara a wubehyia no, sɛ ɛte sɛn oo, sɛ ɛte sɛn oo, obetumi aboa wo ama woadi so.
16 Ɛnnɛ, Yehowa de n’Asɛm Bible no kyerɛ yɛn kwan, na “n’asɛm de ahoɔhare tu mmirika.” Wei kyerɛ sɛ, bere biara a yehia akwankyerɛ no, Yehowa ntwentwɛn so koraa na ɔde ama yɛn. Akwan bɛn na ɔfa so boa yɛn? Wo de, hwɛ sɛnea wokenkan Bible a, wunya so mfaso. “Akoa nokwafo ne ɔbadwemma” no ayɛ nhoma ama yɛn, yɛhwɛ JW Broadcasting, na yɛkɔ jw.org nso. Afei yɛwɔ mpanyimfo a yɛne wɔn susuw yɛn nsɛm ho, na yɛne yɛn nuanom Kristofo bɔ fekuw. Wei nyinaa boa yɛn paa. (Mat. 24:45) Wuhia akwankyerɛ a, wunhu sɛ Yehowa ntwentwɛn so koraa na ɔde ama wo anaa?
17 Simone ahu sɛ Onyankopɔn Asɛm wɔ tumi. Ná ɔte nka sɛ ne so nni mfaso biara, enti na onnye nni sɛ Onyankopɔn dɔ no. Nanso, bere a n’abam bui no, wannyae mpaebɔ da. Ɔsrɛɛ Yehowa sɛ ɔmmoa no. Afei nso, wamfa ne kokoam adesua anni agorɔ. Ɔkae sɛ: “Tebea biara a mehyia no, mihu sɛ Yehowa ma me akwankyerɛ na ɔhyɛ me den.” Wei aboa no, enti onnwinnwen nhaw ne ho.
18. Adɛn nti na wote nka sɛ Yehowa gye wo tom? Nneɛma bɛn nti na wubetumi aka sɛ “Munyi Yah ayɛ!”?
18 Ná odwontofo no nim sɛ Onyankopɔn nkurɔfo a wɔtenaa ase tete no yɛ soronko. Wɔn nkutoo ne ɔman a Onyankopɔn de “n’asɛm,” ne “n’ahyɛde ne n’atemmusɛm” maa wɔn. (Kenkan Dwom 147:19, 20.) Ɛnnɛ, yɛn nko ara ne nnipa a Onyankopɔn adom yɛn de ne din ato yɛn so. Yɛabehu Yehowa, na yɛde n’Asɛm bɔ yɛn bra. Wei ama yɛabɛn no paa. Sɛnea odwontofo a ɔkyerɛw Dwom 147 yɛe no, yɛn nso yebetumi ateɛm sɛ “Munyi Yah ayɛ,” na yɛahyɛ afoforo nkuran ama wɔayɛ saa ara.
Text Baabi a wubetumi atwe nneɛma akenkan ƆWƐN-ABAN—NEA ADESUA NSƐM WOM July 2017
Audio Baabi a wubetumi atwe nneɛma abɔ atie ƆWƐN-ABAN—NEA ADESUA NSƐM WOM July 2017